Akhrinta maskaxda internetka > Dib u eegida Keen
Dib u eegista Keenyaanka oo buuxa
KeenWebsaydhku wuxuu ku faanaa 1000 ka mid ah “cilmi-nafsi la aqoonsan yahay” waxa qosolka leh ee ka jira midkoodna maahan mid ka mid ah cilmi-nafsiyadan qofna ma caddeyn. Keen waxaa dhab ahaan iska leh shirkadda taleefanka ee AT&T. Qof kasta oo isku sheega nafsiyan waa ku biiri karaa oo bilaabi karaa inuu lacag ka helo macaamiisha aan laga fiirsan. Ma jiro nidaam baaritaan ama xaqiijin ah. Cilmu-nafsiga waxay bixiyaan lacagta Keen.com si loogu muujiyo degelkooda, loona soo saaro lambar taleefan Keen ah. Keen wuu fiicnaan jiray laakiin dhawaanahan diiwaanka waxaa ka buuxa koox cusub, oo khibrad u leh lataliyeyaal maskaxeed hadda. Runtii kuma talin karo Keen dambe. Waxaa iga goostay qaar badan oo ka mid ah waxa loogu yeero maskaxiyan. Haddii aad raadineyso talo dhab ah waxaan kugula talinayaa inaad iska ilaaliso Keen. Ha filanin in lacagtaada dib lagugu soo celiyo hadaad akhris xun kuhesho sidoo kale .. Marnaba ma awoodo.
Keen.com waxaa aasaasay 10 sano ka hor maskaxiyan dhab ah. Dhawaan milkiilaha wuxuu ka iibiyey shirkadda AT&T, shirkadda taleefanka, waxayna hoos ugu sii dhaadhaceen tan iyo markaas, illaa heer ay iyagu qiime ahaan aan u lahayn aragtidayda. Nidaamkooda jawaab celinta waa wax fiican laakiin waxaan dareemayaa in si fudud loo maareeyay.
Keen waxay u muuqataa in aaney jirin nidaam baaritaan oo loogu talagalay maskaxda. Waxay leeyihiin shuruudaha qaarkood marka ay jir-dhiska is-qoraan, laakiin waxba maahan in la xaqiijiyo cilmi-nafsiga. Sababta Keen waxay leedahay khibrado badan oo online ah oo ka badan adeeg kasta oo kale waa sababtoo ah waxay u ogolaan doonaan qof walba in uu wax akhriyo.
Keen ayaa dhawaan cusbooneysiisay degelkooda si ay uga dhigto mid saaxiibtinimo leh. Waan jeclahay naqshadda cusub waxaanan u arkay inay aad u fududahay inaan ka ag dhawaado oo aan si dhaqso leh uga jawaabo. Helitaanka maskaxda iyo jadwalka aqrinta iyaga ayaa ahaa mid fudud. Waa nasiib darro in lataliyayaashooda maskaxda ay wax ku dhacaan ama ku seegaan.
Keen waxay bixisaa daqiiqado 3 bilaash ah macaamiisha cusub. Waa inaad saxiixdaa, kaadhka deynta oo aad iibsatid daqiiqado dheeraad ah si aad u hesho daqiiqadahaaga 3. Waxaan helay daqiiqado 3 si dhakhso ah waxaan u qaatay dhamaantood oo kaliya iyagoo isku dayaya in ay helaan cilmi nafsi karti leh. Keen wuxuu leeyahay macaamiil cusub oo macaamiisha ah oo ka soo baxa dhammaan adeegyada maskaxda internetka.
Xaqiiqdi waan hubaa Keen ma laha waaxda adeegga macaamiisha. Ugu yaraan maan helin qof nool oo ka jawaaba. Waxaan helay emayllo badan oo jawaab-celin otomaatig ah oo ii sheegaya in taageerada ay si dhaqso leh ula xiriiri doonto laakiin waligey wax xiriir ah kama helin. Keen ma bixiyo taageerada taleefanka kaliya taageerada emaylka.